sql learning from query [tuto] - .::just for share::.
Home » Hacking » Knowledge » SQL » sql learning from query [tuto]
sql learning from query [tuto]
ဒါလေးကတော့ဖြင့် MSF(myanamr security forum) က kid ရေးထားတဲ့ tuto လေးပါ ငှိငှိငှိ ရှင်းရှင်းပြောရရင် copy ပေါ့ဗျာ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ်ရေးတာကိုယ် copy တာပဲ :D
အခုဟာကဘယ်လိုပြောရမလဲ သိပြီးသားသူတွေအတွက်ကျတော့ နည်းနည်းရယ်ချင်စရာဖြစ်မယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် လုံးဝစမယ့်သူတွေအတွက်ကျတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲ့လိုလုပ်နေတာ ဟီး ဘယ်ကစတာလဲဆိုတော့ ဦးအလန်းရဲ့သိုင်းပြောင်းပြန် injection ကနေ စဉ်းစားမိပြီး အဲ့လိုတွေလုပ်ဖြစ်သွားတာ dork လေးတွေတော့လိုမယ် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့inject လုပ်တယ်ပဲထား advence လို့ ပြောရမယ့် နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တာလေးတွေမပါဘူးပေါ့ ကျွန်တော်တို့ လို beginner တွေထိုးတယ် ။ ဘယ်မှာဆုံးလဲ group_concat(username,0x3a,password) မှာဆုံးတယ်မလား???
အဲ့တော့ dork လေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ် ဒီလိုလေး >>> inurl:group_concat(username,0x3a,password) ဆိုတော့ ဘာတွေကျလာမလဲ တကယ်ကျွန်တော့်လိုင်း လုံးဝမကောင်းလို့ ပါ လင့်ပဲ ချိတ်ခဲ့မယ် ဒီလင့်ကလိုဟာမျိုးတွေ တွေ့ ရမယ်ဗျာ အများကြီးပဲပေါ့
ကဲဝင်လို့ ရရင်တော့လဲဝင်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်ကတော့ မရတာက နဲနဲပိုးများသလားလို့ ဗျ ဟီး
ထားပါ ကျွန်တော်အခု ပြောချင်တာက admin ဝင်နိုင်ဖို့ အတွက်မဟုတ်ဘူးဗျ ကျွန်တော်တို့ အဲ့လိုရှာလိုက်တော့ ဘာတွေလုပ်လို့ ရမလဲ ဆိုတော့ admin ဝင်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ထိတိုင်အောင်ထားဦး ကိုယ့်အတွက် အင်တာနက်ဖိုးကုန်ရကျိုး ဘာကျန်မလဲဆိုတော့ အရင်လူသုံးသွားခဲ့တဲ့ query တွေလေ့လာလို့ ရမယ် သူဘယ်လိုသုံးသွားလဲ ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲ waf ဘယ်လိုကျော်သွားလဲ ဘာညာ အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့နော် ဟီး ကျွန်တော်သိတာလဲ waf ကျော်တာလောက်ပဲသိသေးတာဗျ အဲ့လိုတွေ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ beginner တွေအတွက်ကတော့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ရနိုင်မယ် မရနိုင်မယ် မသိတာကြီးကို စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ထိုးနေမယ့်အစား ဒီလိုဟာလေးတွေလိုက်ကြည့် query လေးတွေလိုက်စုရင်း မှတ်ထားရင်း လိုက်ထိုးတာ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ကိုယ်ဥာဏ်ထုတ်နိုင်ရင် ထုတ်နိုင်သလို စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ် (ကျွန်တော်ဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တော့ ထွက်တယ် ဟီး) ဥပမာ
Labels: Hacking, Knowledge, SQL